Lasoco Fiidiyowyadaada Youtube | Martech Zone
Monday, July 13, 2009 Arbacada, February 22, 2017 Douglas Karr
Dad badan ma ogaadaan, laakiin Youtube wuxuu leeyahay xoogaa aasaasi ah Analytics si aad ula socoto fiidiyowyadaada. Haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto cidda soo gelineysa iyo inta riwaayadood ee ay heleen, waa wax iska fudud isticmaalka Youtube -ka aragti qalab.
Marka hore, gal Koontadaada Youtube oo dooro mid ka mid ah fiidiyowyadaada. Waxaad ogaan doontaa aragti badhanka dhinaca midig:
Xiga, dooro Discovery waxaadna heli doontaa liiska xulashooyinka:
Dooro Ciyaaryahan gundhig ah oo waxaad la kulmi doontaa liiska dhammaan boggaga fiidiyowgu ku xirnaa iyo inta aragtiyood ee uu ka helay halkaas:
Tani waa qalab weyn oo loogu talagalay suuqgeynta! Haddii degelku soo qaado mid ka mid ah fiidiyowyadaada fiidiyoowga ah, tani waa hab weyn oo loola socdo oo keliya ma aha goobaha xiiseynaya - laakiin boggaga ay wataan xoogaa taraafikada ah. Waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa tirakoobyadan adoo adeegsanaya faylka CSV.
Tags: youtubefalanqaynta youtubesuuqgeynta youtubecabirka youtuberaadinta youtube
Jul 14, 2009 markay ahayd 3:35 AM
Taasi waa wax aad u fiican, waana hubaal inaan ku dari doono raad-raaca markaan bilaabayo inaan dhajiyo youtube-ka.